မင်္ဂလာနယူး 2014 တစ်နှစ်တာ! ငါလက်ဆောင်တွေပေး။ - ဆောင်းပါးများ - 2019
ငါလက်ဆောင်တွေ၏ဖြန့်ဝေ၏ရလဒ်များကိုရတဲ့ငါ! (သူတို့ကိုငါနှင့်ကနဦးနှုတ်ခွန်းဆက်စကား၏စာသားကိုဖြန့်ဝေခဲ့သည်အမျှဒီစာသားကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရှိပါတယ်) ။ ထူးဆန်းပေမယ့်မှသာလူသုံးယောက်လက်ဆောင်တစ်ခုရချင်, FeedBurner စာရင်းဇယားဖြစ်သော်လည်း 50 ကျော် subscriber များအားဤဆောင်းပါးကိုထုတ်စစ်ဆေးထံသို့လာကြပါပြီ။ အဆုံးမှာတော့ကျွန်မမူလကစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းနှစ်ဦးလက်ဆောင်တွေကန့်သတ်ခံရဖို့မဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, စာဖတ်သူတွေ၏လက်ဆောင်ကိုလက်ခံရရှိရန်လိုခငျြသမြှသောသုံးစာအုပ်တွေပေးရ:
Sergei မိုက်ကယ် Kofler စာအုပ် - Linux ကို။ installation, configuration များ, အုပ်ချုပ်မှု။ ဆာဂေး 14 ဒီဇင်ဘာလ 2013 နှင့်အတူစာရင်းပေးသွင်းပြီး။ အောင်မြင်စွာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့🙂
အယ်လီနာ, စာအုပ်အဆိုပါတရုတ်လေ့လာမှုဖြစ်သူ Colin ကမ့်ဘဲလ်။ တင်ပို့။ 2013 ခုနှစ်မေလနှင့်အတူတစ်ဦးကစာဖတ်သူကို။
အဲလက်စ်, အင်္ဂလိပ်အတွက်ရစ်ချတ် Branson ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ။ အမည်များကိုငါပေးနှင့်ဝေးမှတ်ချက်များထံမှယူလိမျ့မညျမဟု autobiography ။ သူကဘာမှမမှားပေမယ့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်အနည်းငယ်သာသောအရာတို့ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုအနည်းငယ်စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးအမည်ဖြင့်ပေးဆောင်ကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ ရဲဘော်အဲလက်စ်သေးဒီနှစ်အောက်တိုဘာလအကုန်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်ပဲ! ပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်သင်ဖို့လာမယ့်အပေါင်းတို့သည်အကောင်းဆုံးနှင့်အတူ! လက်ဆောင်တွေပို့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖို့က e-mail ဖြင့်အားလုံးအဆက်အသွယ်အတူ။ နှင့်အညီ, တစ်ချိန်တည်းမှာ ပို. အချိန်မှတ်ချက်များ, တော်တော်လက်ဆောင်တွေအတွက်သို့မဟုတ်မမှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ အရာအားလုံးအတွက်ကံကောင်းပါစေ!
မင်္ဂလာပါ ရုတ်တရက်ငါ့ website ဧည့်သည်များမှကျဆင်းသွားတဲ့သူစာဖတ်သူများ!
မင်္ဂလာနှစ်သစ်, ငါအသစ်ကတစ်ခုခုသင်ယူဖို့သစ်ကိုတစ်နှစ်အလိုရှိ၏, ရှာဖွေတွေ့ရှိပါစေ, ပျင်းရကမ္ဘာတွင်အံ့သြမဟုတျဘဲဆက်လက်။ အခြားသူများနှင့်သင်တန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်, ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေး😉
ဒါ့အပြင်ငါလက်ဆောင်တွေပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်မစာအုပ်တွေကိုငါပေးမည်။ ပထမတော့ငါမဆိုပြိုင်ပွဲစီစဉ်ဖို့စဉ်းစားပေမယ့်သူကဒီမှာကြောင်းလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ...
ရက်စွဲ, ငါ့ E-mail ကို subscriber များအား 377 လူ, ဒီစာရင်းပဲသင်၏ကွန်ပျူတာသိမ်းဆည်းနှင့်ငါလက်ဆောင်တစ်ခု (ဒါဝေးကိုငါ့စာဖတ်သူတွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဆိုလိုသည်မှာထို) လုပ်လိုသောသူတို့ကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။
သငျသညျဆိုပါက - သူတို့ထဲကတစ်ခုစာရင်းပေးသွင်းထားသူ, သငျသညျအထိ 1000 ရူဘယ်၏စာအုပ်တန်ဖိုးကို ozon.ru ရွေးချယ်နိုင်သည်။ မရဆိုပေမယ့်လေ့ကျင့်ရေးကိုသာသဘောသဘာဝ, ဒါပေမယ့်မလိုအပ်ကွန်ပျူတာများအကြောင်းကို, တကသစ်သားပန်းပုနှင့်ဂျပန်ဘာသာစကားသင်ခန်းစာနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျ (ကမှတ်ပုံတင် e-mail လိပ်စာသတ်မှတ် e-mail ကိုသတင်းလွှာအတွက်, သငျသညျပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်စာအုပ်တစ် link ကိုဖွင့်ခေါင်းစဉ်နဲ့စာရေးဆရာမဟုတ်ပါ) လိုသည့်စာအုပ်ဆိုင်ကို select ထားတဲ့အတွက်မှတ်ချက်ရေးပါ။
ပထမဦးဆုံးနှင့်ပဉ္စမစာရင်းပေးသွင်းထားသူတစ်ဦးတပ်မက်လိုချင်သောစာအုပ်ရမှတ်ချက်ထားခဲ့ပါ။ စာရငျးထဲမှာ "မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ subscribers" ပေါ်တွင် comments ပါဝင်ပတ်သက်သည်မဟုတ်, (spam များကိုနှင့်အခြားမကောင်းတဲ့အရာများအတွက် မှလွဲ. ) မပယ်ရှား။ တစ်ခုချင်းစီကိုစာရင်းပေးသွင်းထားသူထံမှစာရငျးမှာသူ့ဟာသူ (အမှု၌သင်တို့ကိုအနည်းငယ်ရေး) မှတ်ချက်ပေးရန်ကိုသာပထမဦးဆုံးပါဝင်ပတ်သက်။
မှတ်ချက်များကို 10 နာရီ 31.12.2013, ထို့နောက်ဖော်ပြပေးနှင့်တစ်ပြိုင်နက် (အောက်တွင်တူညီသောဆောင်းပါး, အတွက်) ဆုရရှိသူထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မည်အထိပြသမည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့နှင့်အတူငါသည်လည်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှင်းလင်းဖို့ e-mail ပို့ခြင်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤအချိန်စာရင်းသွင်းသူများမှပင်5မှတ်ချက်များကိုရောက်ရှိမပါဘူးဆိုရင်, ထို့နောက်သူကကြေညာခြင်းနှင့် 31 ၏ညဦးတိုင်အောင်, တဖန်စောင့်ပါ။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကရိုက်လိမ့်မည်ထင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ! ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ပါပဲ။ သင်မှန်မှန် remontka.pro ထံမှအက္ခရာများခံလျှင်ဒီတော့စာအုပ်တစ်အုပ်နှင့်အစီရင်ခံစာကိုရှေးခယျြ! မင်္ဂလာနှစ်သစ်,
UPD: 31.12.2014, 9:42: ဒီတော့ဝေး, အဘယ်သူမျှမဋီကာဆရာ။ ရုံမေးလ်ထဲမှာဖြစ်စာပို့စာရငျးသွားကြဖို့ရှိပါတယ်, အဲဒီမှာပါလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ နေ့လည်အခွအေနမှာကြည့်လိုက်ပါ။
UPD: 14:28: ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါသည် - ဆာဂေး, Linux, စာအုပ်။ installation, ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ, အုပ်ချုပ်ရေး, မိုက်ကယ် Kofler။ ဒါပေမယ့်သေးပဉ္စမ။ တစ်စက္ကန့်စာအုပ်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် 18:00 GMT, ယခုအချိန်တွင်အဲလက်စ်သောနောက်ဆုံးမှတ်ချက်များ, ယူပါလိမ့်မယ်သည်အထိစောင့်ဆိုင်း။ သို့မဟုတ် 5th, ကပုံပေါ်လျှင်, အခြေအနေများအပေါ်ဖြစ်သကဲ့သို့။